C/kariin Xuseen Guuleed oo sheegay in Puntland uu ka dhaqan-geli la’yahay heshiiskii Gaalkacyo (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/kariin Xuseen Guuleed oo sheegay in Puntland uu ka dhaqan-geli la’yahay heshiiskii Gaalkacyo (AKHRISO)
Madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa shaaca ka qaaday in maamulka Puntland uu caqabad ku yahay fulinta heshiiskii nabadda ee sanadkii hore 2015-ka lagu kala saxiixday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Madaxweyne Guuleed oo wareysi siiyay mid ka mid ah warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay in maamulkooda ay mar walbo diyaar u yihiin in gogosha nabadda la isugu yimaado, islamarkaana derris wanaag lagu wada-noolaado, balse ay Puntland cago-jiid ka keentay arrintaas.
“Sida aad dhamaantiin ula socotaan, sanadkii hore waxaa heshiis nabadeed magaalada Gaalkacyo kula saxiixanay walaalheed Puntland, waxaana heshiikaasi garwadeen ka ahaa dowladda Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka, waxaana ka xunnahay in heshiiskaasi uu ka dhaqan-geli la’yahay dhinaca Puntland”. Sidaas waxaa yiri madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed
Dhinaca kale, madaxweyne C/kariin Guuleed ayaa sheegay in Puntland ay diiday inay soo fariistaan miiska wada-hadalka islamarkaana dhowraan heshiiskii sanadkii hore la saxiisay, si loo helo deganaansho iyo wada-noolasho ku dhisan in labada dhinac ku noolaadaan si nabad ah.
“Walaalaheen Puntland waxay diideen in miiska wada-hadalka soo fariistaan, islamarkaana halkaasi laga sii amba-qaado nabaddii la kala saxiixay, si loo helo deganaanshiyo iyo xasilooni buuxda oo deegaankaan ah, waxaa xaqiiqo ah in dadka reer Galmudug iyo Puntland yihiin kuwa nabadda ugu baahida badan” Ayuu madaxweyne Guuleed hadalkiisa raaciyay.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay madaxda maamulka Puntland inay ilaaliyeen derisnimada labada maamul, lagana fogaado wax walbo oo colaad hurin kara.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka kasoo yeeray madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa imaanaya kadib markii la sheegay in ciidamada maamulka Puntland oo diyaarado Mareykanka ah la socdaan ay weerar ka fuliyeen deegaanka Jeexdin ee duuleedka Gaalkacyo, halkaas oo la tilmaamay inay ku sugnaayeen ciidan ka tirsan maamulka Galmudug.